Ngwa ọrụ igwe ọ nwere isi ọwụwa? Nna-ukwu na-akụziri gị usoro aghụghọ atọ a
N'oge a, ọ na-esiriwanye ike ịmepụta ngwaahịa na ụlọ ọrụ igwe, ihe ndị a chọrọ ka ndidi na-esiwanye ike, ihe ndị a chọrọ na-arịwanye elu na-arịwanye elu. Gịnị ka m kwesịrị ịme ma ọ bụrụ na akụrụngwa igwe amaa jijiji? Nna-ukwu na-akụziri gị ole na ole aghụghọ! Ọ bụrụ na ...
You maara akụkọ ihe mere eme nke akụrụngwa akụrụngwa?
site ha na 21-01-06
Igwe akụrụngwa bụ igwe na-eme ka oghere dị n'ime igwe rụọ. Ọ bụ igwe na-eme igwe, ya mere a na-akpọkwa ya "nne igwe" ma ọ bụ "igwe akụrụngwa". A na-akpọ ya dị ka ngwaọrụ igwe. Kedu ụdị akụrụngwa igwe? Enwere m ...
Nzube na ntinye nke ihe ngbasawanye di mfe maka ntughari NC
Akwụkwọ a na-ewebata ụdị usoro nhazi maka ịgbanye eriri mgbanaka dị n'ime oghere na ahụ na-abụghị nke na-agbagharị, na-elekwasị anya na isi ihe eji arụ ọrụ, usoro eji eme ihe, ụkpụrụ bụ isi, isi uru na ihe ndị ọzọ. Maka ụfọdụ akụkụ pụrụ iche nke oge opupu ihe ubi na mmiri ...
World Steel Association: mmetụta nke okpueze ohuru ohuru na ngwongwo ihe eji eme ihe
Igwe igwe, igwe na-ere ihe igwe, ihe mkpofu ígwè na ihe ndị ọzọ maka ígwè na nchara bụ ihe ndị kachasị ibu n'ụwa n'ihe gbasara mmepụta, oriri na njem. Na nso nso a, zuru ụwa ọnụ ígwè na ígwè ụlọ ọrụ belatara mmepụta n'ihi nkọ nkọ o ...